मीन प्रकाश उप्रेती
राजदूत लामाको दृष्टि र कोरियाको अवस्था
[2012-05-05 오후 1:19:00]
कोरियाका लागि नेपाली राज दुत कमान सिह लामा ले आफ्नो कार्यभार समाल्न कोरिया आउनु पूर्व एक दैनिक पत्रिकालाई दिएको अभिव्यक्तिले निकै चर्चा पायो ।bत्यसलाई केही अनलाइन पत्रिकाले समेत आफ्नो मुख्य समाचार बनाए ।आउदो साता देखि वहा कोरियामा नेपाली राजदूतको कार्यभार पनि समाल्दै हुनुन्छ ।
महामहिम राजदूत लामाले कोरियामा काम गर्न जानका लागि गरिने छनौट प्रक्रिया गलत भएको बताउनु भएको थियो । बढी पढेलेखेका गए र काम गर्न सकेनन् पढि अधिकार खोजे भन्ने वहाको आशहय थियो ।यो भनाई झट्ट हेर्दा र सुन्दा सतहि रूपमा ठिकै जस्तो लाग्छ । किन कि हामी नेपालमा हुर्किएका हौ र बढी कुरामा विश्वास गर्दछौ।हामी अलिकति शिक्षा मात्र भयो भने एउटा पर्टि समाति आन्दोलन हडताल वा यस्तै किसिमका कृयाक्लावमा संलग्न हुन चाहान्छौ।यो नेपालको नियतिनै बन्न पुगेको छ । त्यही परिवेशलाई मुल्याङ्गकन गरी दिएको उक्त अभिव्यक्तिलाई त्यति अनौठो नमाने पनि हुन्छ । किनकि देशका नेताहरूले सबैलाई यही सिकाएका छन् अनि लुरुलुरु हामी त्यसैको अनुसरण गरि रहेका छौ। तर कोरियाको अवस्था फरक छ यहाँका सबै मानिस शिक्षाको रेखा माथि छन्।सबै टेक्निकल ज्ञानबाट पोख्त छन् र उनीहरू श्रममा विश्वास गर्दछन् ।
हामीले यति बेला दार्शनिकले भनेको एउटा कुरालाई सम्झनु जरुरी छ परिवेशको चेतना भन्दा माथि गयौँ भने सफल हुदैनौ ,तल झर्यौ भने पनि सफल हुदैनौ , स्थानीय क्षेत्रको चेतनासँगै जाउ सफलता पाउने छौ । हो आज कोरियामा नेपालीहरूले कोरियनहरुको चेतना र ज्ञानसँगै काम गर्नु पर्ने अवस्था छ जुन शिक्षा बेगर संम्भव छैन । कोरियामा आज सम्म पनि नेपालीहरूले जसरि काम गर्दै आएका छन् । त्त्यसमा पनि शिक्षाकै अभाव देखिएको छ । यहाँ त ब्यवाहारिक ,टेक्निल र औधोगिक शिक्षाको आवश्यकता छ ।जसमा हामी अझै पूर्ण हुन सकेका छैनौ ।
कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणलि (ईपिएस) लागू भए यतामात्र दुर्घटना र आत्माहत्याबाट सोह्र जाना नेपालीले ज्यना गुमाएको शिक्षा धेरै भएर होइन शिक्षाको कमी भएर हो । करिब तिन हजारको सङ्ख्यमा अङ्ग भङ्ग भएका छन् । घर फकर्दा सग्लो फर्नपाएका छैनन् ।त्यही ओधोगिक ज्ञानको कमी भएर हो । भैसे पर्टिमा गराईने तालिम सँगै सँगै नेपालमै रहेका ‌औधोगिक क्षेत्रमा लगि वस्तुगत र मेशिनको बारेमा ज्ञान दिनु अहिलेको आवश्कता हो ।जुन ज्ञान र शिक्षाले गर्दा उ कोरियामा सजिलै काम गर्न सकोस ।
जहा सम्म कोरियामा रहेका नेपालीहरू शिक्षित भएकैकारणले काम गर्न सकेनन् भन्ने राजदूत महोदयको सोचाई छ त्यो भ्रम हो । यहाँ धनी वर्गका नेपालिहरुलाई राजजगारको आवश्यकतै छैन र उनीहरू आएका पनि छैनन् ।यहाँ त हलो जोतेर पसिना बगाई अलिकति भए पनि शिक्षा हासिल गरेका गरिब र मध्यम वर्गका नेपाली श्रमिकहरु आएका छन् । के ती नेपालिहरुका लागि उनीहरूले लिएको शिक्षा अपराध भयो ? अहिले त जो कोही क्षमता र योग्यता भएका नेपाली थोरै रकमाम कोरिया छिर्नु पाएका छन् यदि यसलाई परिवर्तन गर्ने हो भने गरिब र सोर्सफोर्स बेगरका नेपालीका दिन समाप्त हुने छन् ।पैसाको चलखेलको खेती हुनजान्छ जुन अहिले जापान जानेले ब्यहोर्नु परेको छ । फेरि श्रमिक भनेका अशिक्षित र अनपढ हुनु पर्दछ उदेश्य हो भने त्यो सामन्ति भावाना र सोच हो ।
राज्यले देशमा भित्रने रेमिटेन्सको आशा गरेको हुन्छ भने उसको अधिकार र सुरक्षाको ग्यरेन्टि गर्न सक्नु पर्दछ । कोरियामा मृत्युको अलावा अबौधानिक हुनु उसको बाध्यता हुन थालेको छ । यहाँका साहु हरुले गर्ने अमानविय ब्यबाहार देखि श्रमिकहरु पीडित भएका छन् । जब कम्पनीमा काम पनि दिदैन पैसापनि दिदैन र कंम्पनि सर्न पाउने अधिकार बाट पनि वञ्चित गराउछ भने उसले कसैलाई गुहार्ने कि नगुहार्ने ? यदि गुहार्दा बढी अधिकार खोजेको हुन्छ भने श्रमिकले बुझेको अधिकार त्यस्तो होइन । यस्तै अवस्थामा पैसाकमाउने सपना बोकेका नेपालीहरू कोरियामा अवैधानिक बन्न बाध्य भएका छन् यसको दोष राज्यले लिने कि नलिने ?
आज कोरियामा काम गरिरहेका र कामकालागि आउन लागेका नेपालीहरूको सुरक्षा र अधिकारको सुनिश्चित गर्नु पहिलो आवश्यकता भएको छ । कोरियन सरकारलाई तिम्रा साउँले गर्ने ब्यबाहार यस्तो छ है भनेर जानकारी गराउनु जरुरी छ । ताकि प्रकृयानै गलत छ भन्दै हुँदै गरेका कुरालाई ओझेलमा पारेर होइन ।
युवा शक्तिलाई विदेशमा जानु अगावै शिक्षित बनाई सम्बन्धित देश र रोजगारदाता कम्पनीको माग अनुसार दक्षता हासिल गराई उसको दक्षताको परीक्षण स्वदेशमा गराएर विदेश पठाउने प्रावधान सरकारी नियकाबाटै अवलम्बन गरिनुपर्छ ।रोजगारमा जान चाहने युवाहरूले शिक्षा सँगै विदेशमा गर्नुपर्ने कुनै पनि कामको स्वदेशमा सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरेको देखिँदैन । जे होस् सरकारी नीतिबाटै वैदेशिक रोजगारकालागि प्रारम्भिक शिक्षासँग व्यवहारिक र प्रबिधिक शिक्षा पनि दिइनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
जुन शिक्षाले गर्दा आत्मनिर्भर भएर विदेशमा गई कामगर्न सक्षम् हुने थिए । जनता विकास भए भने राष्ट्र विकास हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिर्वतनको खांचो छ ।शिक्षित भएर काम गर्नसकेनन भनेर होईन ।